Covid-19 Wuxuu Sii Hurinayaa Xiriirka Caalamiga ah | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
BBC Somali — April 10, 2020
Waa dhab in xurgufta ka dhaxeysa Mareykanka iyo Shiinaha ay u muuqato mid sababeysa hanjabaad, gaar ahaan hanjabaaddii Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ahayd inuu joojin doono dhaqaalaha uu siiyo Hay`adda Caafimaadka Adduunka ee (WHO) oo uu ku eedeeyay inay la safan tahay Shiinaha. Balse xiisado kale ayaa ka jira qeybo kale oo dunida ka mid ah. Mar walbana maaha inay ku lug leedahay Shiinaha, oo wajaheysa cambaareyn ku aaddan inaysan ka run sheegin tirade kiisaska fayraska.
Waxaa tusaale loo soo qaadan karaan xiisadda ka dhex taagan dalalka Midowga Yurub. Markii kiisaska Covid-19 ee Talyaaniga ay cirka isku shareereen, wuxuu dalalka deriska ah ka codsaday caawinaad dhanka qalabka caafimaadka ah. Balse Jarmalka iyo Faransiiska ayaa labaduba mamnuucay dhoofinta qalabkaas.
“Tani calaamad fiican uma aha isku duubnida Yurub,” ayuu ku yiri qoraal uu barta Politico ku qoray safiirka Talyaaniga u fadhiya Brussels, Maurizio Massari. Dadka Talyaaniga lama aysan dhicin arrintaas, Berlin waxay ka mid tahay dalalka ka soo horjeeda in la caawiyo dalalka Yurub ee sida ba`an uu u saameeyay xanuunka safmarka ah.
Talyaaniga ayaa sidoo kale tusaale u ah waxa ay khubarradu ugu yeereen”diblomaasiyadda maldahan”: ee Shiinaha. Kaddib markii uu Talyaanigu si iskiis ah ula tacaalay coronavirus, Beijing ayaa dalal badan oo qaarado kala duwan ku yaalla ku harqisay caawinaad xakameynta fayraska ah, waxaa dalalkaas ka mid ah Ruushka. Rome ayaa heshay deeqo caafimaad, qalabka baaritaanka iyo xitaa dhaqaatiir ka yimid Shiinaha oo loo aqoonsaday geesiyaal. Xaqiiqdii, hal-ku-dhigga #grazieCina (Mahadsanid Shiinaha) ayaa ku baahay baraha bulshada Talyaaniga.
Marka laga soo tago dagaalka ay Washington kula jirto Shiinaha, Trump ayaa ka yaabiyay Jarmalka kaddib markii uu isku dayay in Mareykanka uu u gaar yeelo tallaalka xanuunka Covid-19 ee ay soo saareyso shirkad caafimaad oo Jarmalka laga leeyahay. Dhowaan madaxweynaha ayaa ka digay inuu ka aargoosan Hindiya, sababo la xiriira go`aankeeda ku aaddan mamnuucidda dhoofinta dawada looga hortago duumada ee hydroxychloroquine, taas oo la tijaabiyay in lagu daweyn karo Covid-19.
Waxay sheegtay in sirdoonka Mareykanka uu ku eedeeyay Shiinaha inay qariyeen tirada dhimashada ka dhalatay fayraska ee dalkaas – saraakiisha Britain ayaa sidoo kale su`aal geliyay xogta rasmiga ah ee Shiinaha. Brazil ayaa ka mid ah dalalka kale ee wax iska weydiinaya siyaasadda Shiinaha: Beijing iyo Brazil ayaa dhowr jeer murmay tan iyo bilowgii xanuunka safmarka ah.
Wuxuu xaalku gaaray heer diblomaasiyiin Shiinees ah iyo xubno ka tirsan xulafada hoose ee madaxweyne Jair Bolsonaro ay hadallo xanaf leh isku dhaafsadaan baraha bulshada. Dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd, markii wasiirka waxbarashada Abraham Weintraub uu ka careysiiyay saraakiisha Shiinaha, kaddib markii uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in dalalka Aasiya ay yihiin cunsuriyaal.
Holcinta xiisaddii hore u taagneyd
“Kiiskan wuxuu muujinayaa sida haatan loogu baahan yahay diblomaasiyadda,” ayuu yiri Gesu.
Balse Fayraska ayaa sidoo kale dabka u sii hurinaya xiisaddii hore u taagneyd. Waxaa tusaale loo soo qaadan karaa dalalka Colombia iyo Venezuela. Dowladda Colombia ma aqoonsana madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro, xiisadda labada dal ayaana sii xumaatay kaddib markii mujaairiin u dhashay Venezuela ay soo buux dhaafiyeen xadka dalkaas.
Kowdii bishan ayay ahayd markii madaxweyne Maduro uu u soo jeediyay dhiggiisa Colombia, Ivan Duque inuu siinayo labo mashiin oo lagu baaro xanuunka Covid-19. Maalmihii ka horreeyay waxaa jiray warar sheegaya in mashiinta keliya ee ay haysatay Colombia ay hallowday.
Xafiiska Duque ayaa ka aamusay soo jeedinta Venezuela, taasna waxay ka careysiisay saraakiisha Venezuela, sida madaxweyne ku xigeenka Delcy Rodriguez.
“Dowladda Ivan Duque waxay diidday labada mashiin ee uu ku deeqay madaxweyne Maduro… waxay muujineysaa sida uusan Mr Duque dan uga lahayn nolosha iyo caafimaadka dadka Colombia,” ayay ku soo qortay barteeda Twitter-ka.
Wareysi oo 7-dii bishan bixiyay ayuu Duque ku sheegay in mashiinnadaasi aysan ahayn kuwo ka shaqeynaya Colombia”. Bariga Dhexe, dalalka Qadar iyo Masar ayaa isku khilaafay muwaaddiiniinta Masar ee ku xannibmay Qadar. Dowladda Qadar, oo la tacaaleysa kiisaska ugu badan ee Covid-19 ee laga soo sheegay dalalka Gacanka, ayaa sheegtay in saraakiisha Masar ay diideen inay aqbalaan duullimaad laga kireeyay shirkadda Emirates. Masar waxay ka mid tahay dalalka Carabta ee tan iyo sanadkii 2017, xiriirka u jaray Dooxa, sababo la xiriira taageerada ay u hayso kooxaha mayalka adag.
Sababo kale oo muran xayiraadda
Balse xiisadaha waxaa kale oo sababa wax ka baxsan xayiraadaha iyo diblomaasiyadda maldahan. 18-kii March, warbixin uu soo saaray Midowga Yurub oo loo dusiyay warbaahinta ayaa ku eedeyneysa warbaahinnada uu Ruushku saameynta ku leeyahay inay faafinayaan warar been abuur ah oo ku saabsan xanuunka Covid-19 e Galbeedka.
Afhayeen u hadlay dowladda Ruushka ayaa beeniyay eedeymahaas. Haddii ay kala qeybsanaantu u muuqato mid sii kordheysa, khubarrada qaar ayaa aaminsan in wax wanaagsan ay ka soo baxeen xanuunka safmarka ah. Annalisa Prizzon, oo ah baare ka tirsan Machadka think-thank ayaa sheegtay in xasaraddan ay ku jirto fursad weyn oo dhanka iskaashiga ah.
“Xasaraddu waxay muujineysaa in dalalka horumaray aysan mar walba ahayn ‘khubarrada’,” ayay tiri Prizzon.
“Sida uu Shiinuhu wax ka qabashada dillaacitaanka xanuunka ula wadaagay Talyaaniga, ayaa ah tusaale muuqda.” Balse Sophia Gaston ayaa aaminsan in weli loo baahan yahay iskaashi intaas ka ballaaran.
“Waa fursad la lumiyay, gaar ahaan dalalka Galbeedka xilli uu jiro dareen bulshonimo iyo qarannimo,” ayay tiri. “Tani waa inay noqotaa xilligii la muujin lahaa quwadda iskaashiga.”
Tags: Sida uu Covid-19 Usii Hurinayo Xiriirka Caalamiga ah
Next post Waa Maxay 'Habdhaqanka Abaabuleed ee Shirkadaha?
Previous post Sideen Guriga ugu Sameysannaa Jeermis Dile Dabiici ah?